အာရှနိုင်ငံအချို့မှ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ထူးဆန်းသော အလှအပစံနှုန်းများ - ONE DAILY MEDIA
အာရှနိုင်ငံအချို့မှ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ထူးဆန်းသော အလှအပစံနှုန်းများ
မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဖက်ရှင်ရှိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလှအပစံနှုန်းတွေ မျိုးစုံရှိနေသော်လည်း လူမျိုးတိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့အလှအပနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားချက်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများရှိကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် အခြားနိုင်ငံများမှလူများက သူတို့၏သွားများကို ညီညာဖြောင့်တန်းလိုကြသော်လည်း ဂျပန်တွင်မူ အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏သွားများကို သွားထပ်များဖြစ်အောင် ငွေကုန်ခံ ဖန်တီးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်အလှအပဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။
အာရှသားတို့ရဲ့ ဆန်းကြယ်သောအလှဆုံးစံနှုန်းများကို‌ လေ့လာကြည့်ရာမှာတော့ သူတို့ထဲကအချို့မှာသမိုင်းကြောင်းအရတွေရှိသလိုအမျိုးသမီးတွေကလည်း ယနေ့ထိ ရိုးရာမပျက်ထိန်းသိမ်းကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးရှိအမျိုးသမီးများက မျက်ခုံးများကို ပြီးပြည့်စုံသော စတိုင်အမျိုးမျိုး ကိုရရှိရန်ဖယောင်းကိုသုံးနေစဉ် တာဂျစ်ကစ္စတန်ရှိအမျိုးသမီးများအတွက်ကတော့ တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေသော မျက်ခုံးမွှေး သည်သာ ရိုးရာအလှဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကမျက်ခုံးကြားကနေရာကိုတောင် အရောင်ခြယ်ပြီး unibrow ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပါတယ်။ မိဘများကလည်း ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့သမီးရဲ့မျက်ခုံးများကိုဤနည်းလမ်းကိုအသုံးချ ပုံ‌ ဖော်ကြပါတယ်။
2.Neck elongating (Myanmar)
လည်ပင်းရှည်များဖြင့် ကယန်းအနွယ်အမျိုးသမီးများကိုပုံ ဖော်ထားပါတယ်။ ဒီအစဉ်အလာမှာမတူညီတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေရှိပါတယ် ။ အစောပိုင်းကာလတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်ပြုခြင်းကနေကာကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်အချို့လူများက လည်ပင်းရှည်များနှင့်အမျိုးသမီးများသည် ရိုးရာပုံပြင်များမှ နဂါးများနှင့်တူသည်ဟုလည်း ဆိုကြပါတယ်။
မိန်းကလေးများဟာ ၅ နှစ်သားအရွယ်မှ စတင်ကာ ကြေးကွင်းများကိုစတင်ဝတ်ဆင်လာပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူတို့၏လည်ပင်းကိုရှည်စေသောကွင်းများပိုများလာပါတယ်။
ဘာလီရှိလူများအတွက် သွားဖြည့်ခြင်းသည်ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များကပြုလုပ်ပြီး မကောင်းဆိုးဝါးရန်မှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ ရင့်ကျက်မှု၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ထပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟုလည်း ဆိုလိုပါတယ်။
သွားဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာ ယခုအခါ ယခင်ကကဲ့သို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရှိသော်လည်း အချို့သောဘာလီလူမျိုးများက‌တော့ သူတို့၏ဇာတိမြေနှင့်ဝေးကွာ နေသည့်တိုင် ၎င်းကိုပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယမှ Shridhar Chillal ဟာ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်ကအသိအမှတ်ပြုသောလက်သည်းအရှည်ဆုံးသောသူဖြသ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမက ကလက်သည်းရှည်တွေကို မရပ်တန့်ပစ်တဲ့အပြင် ခြေသည်းတွေလည်းရှည်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခြားနေရာများနဲ့ မတူဘဲ ရှည်လျားသောခြေသည်းလက်သည်းများဟာ လူကြိုက်များသည်ဟုယူဆကြပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ကိုယ်ရည်သုံးအလှကုန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအများဆုံးရှိ‌ သောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသည် နာမည်အကြီးဆုံးပလတ်စတစ်ဆာဂျရီခွဲစိတ်မှုစာရင်း၏ထိပ်ဆုံး ၃နိုင်ငံထဲ ပါဝင်ပါတယ်။အန္တရာယ်များသော်လည်း အမျိုးသမီးများဟာ နှလုံးသားပုံသဏ္ဍာန်မျက်နှာရရှိရန် ပါးပြင်ရိုးပြုပြင်ခြင်း ၊ V ပုံသဏ္ဍာန်မေးရိုးပြုပြင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။
6. Yaeba” — crooked teeth (Japan)
ကမ္ဘာ့အခြားဒေသ အသီးသီးရှိလူများက သူတို့၏သွားများကို ညီညာရန်ငွေအမြောက်အများသုံးစွဲ ပြုပြင်နေစဉ် ဆန့်ကျင်ဘက် အနေဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တော့ အမျိုးသမီးများဟာ သူတို့၏ သွားများကို သွားထပ်၊သွားစွယ်များ အဖြစ်ပုံဖော်ရန် ငွေသုံးစွဲနေကြပါတယ်။yaeba (သို့)“ double tooth” ဟုခေါ်ပြီး သွားဆရာဝန်များက သွားစွယ်များပေါ်တွင်အမြဲတမ်း (သို့) ယာယီ ပလတ်စတစ်အဖုံးများ အုပ်ပေးခြင်းဖြင့် “snaggleteeth” (သွားထပ်) ကိုပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။
သွားများကို မဲနက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ‘ohaguro’ဟုခေါ်သော သံအရည်ဖြင့်သွားများကိုအနက်ရောင်ဆိုးခြင်းဟာ ဂျပန်ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အဆိုပါဓလေ့ကို ပြုလုပ်သူမရှိ‌တော့သော်လည်း သွားအနက်များဟာ ဂျပန်သမိုင်း၏အလှအပတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Ohaguro သည် သူတို့၏အလှအပနှင့်လက်ထပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကိုပြသရန် အမျိုးသမီးအများစု အသုံးပြုသော သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နှာခေါင်းခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း၏ နာမည်ကျော်မှုကြောင့်အီရန်ကို “ကမ္ဘာ့နှာခေါင်းမြို့တော်” ဟုအမည်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ အမျိုးသမီးအများစုဟာ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဦးခေါင်းများကိုဖုံးအုပ်ထားရသောကြောင့် သူတို့ရဲ့ မျက်နှာအသွင်အပြင်ကို ပြင်ဆင်ရန်အာရုံစိုက်ကြပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုအပြီးတွင်ကပ်ရ‌သော နှာခေါင်းတိပ်ဟာ အထူးဂုဏ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး-“ ဂုဏ်သ‌ရေရှိပတ်တီး”လို့ယူဆကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ဒါကိုဖုံးကွယ်ဖို့မကြိုးစားဘဲ သူတို့ရဲ့မကြာသေးမီကခွဲစိတ်မှုရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအနေဖြင့် ဂုဏ်ယူစွာပြသကြပါတယ်။အချို့ကလည်း
ခွဲစိတ်မှုတွေကိုငွေကြေးတတ်နိုင်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ သူတို့ရဲ့ခွဲစိတ်မှုအပြီးပတ်တီးကို ၀တ်ထားကြပါတယ်။
ဒီထဲကအဆန်းဆုံးအလှအပတစ်ခုကိုပြပါဆိုလျှင် သင်ဘာကို ရွေးချယ်မလဲ ???
ဂရုမစိုက်ခြင်းအနုပညာနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ အလန်းစားဆံပင်ပုံစားများ
ရေ‌မျောကမ်းတင်သစ်တုံးများကို လက်ရာမြောက်ရုပ်တုများအဖြစ် ပြောင်းလဲဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ကနေဒါပန်းပုဆရာ